Lubricant Oils Manufacturers, Suppliers - China Lubricant Oils Factory
Petroking Anti-Gqoka umfutholuketshezi Amafutha # 46
I-ANTI-WEAR HYDRAULIC OIL ingumugqa wamafutha okugcobisa ama-antiwear wekhwalithi ye-premium ahlanganiswe kusetshenziswa uwoyela wamaminerali osezingeni eliphezulu okhethiwe nocwengisiswe kahle, kuhlanganiswe nohlelo lokuxhuma olunemisebenzi eminingi futhi lutholakala ebangeni elibanzi le-viscosity kusuka ku-ISO Grade 32 kuya ku-150. Lo mugqa wamafutha unawo yakhelwe ukuhlangabezana nezidingo zabakhiqizi abakhulu bamaphampu we-hydraulic, futhi ukusetshenziswa kwayo kufaka phakathi amasistimu we-hydraulic asetshenziswa kwizicelo zezimboni nezasolwandle kanye nasemishinini yeselula.
Petroking Udizili Injini Amafutha Cf-4 20w-50
I-PETROKING CF-4 DIESEL OIL ihlanganiswe ngamasheya wesisekelo se-viscosity ephezulu acwengeke kakhulu ngephakethe eliphambili.I-PETROKING CF-4 DIESEL OIL MEETS API CF-4 incazelo kawoyela wedizili, kanye nokucaciswa kwenjini ethile ye-OEM njengeCummins CES20075, Mack EO -K2, Volvo VDS neMercedes Benz MB228.1.
Petroking Udizili Wenjini Amafutha CH-4 10W-30 / 15w-40 / 20W-50
I-API CH-4 I-DIESEL OIL igcina injini isebenza ngokuthembekile ngenhlanganisela yamasheya asezingeni eliphakeme we-viscosity index ephezulu nge-premium additive system.Zenzelwe ngokukhethekile izinjini zedizili ezisindayo, futhi zinikela ngokudlala okuhlukile ngokulawulwa kwensizi, ukuhlanzeka kwenjini futhi ugqoke ukuvikelwa.
I-ROLLESTER API CH-4 DIESEL OIL idlula ukucaciswa kwe-API CH-4 futhi ihlangabezana nezidingo ezithile ezinkulu ze-OEM, njengeCummins CES20071 / CES200076, Volvo VDS2 neMercedes Benz MB 228.3 njll.
Petroking umfutholuketshezi Transmission Amafutha # 8 20L Ibhakede
I-HYDRAULIC TRANSMISSION OIL isebenzisa uwoyela ophakeme we-viscosity index kanye ne-agent ehlanganisiwe engenisiwe, kanye nezinto eziyingqayizivele ze-CHT5 nano-ion ezivela ekwakhiweni kwensimbi yomshini yokwenza ifilimu yokuvikela enamandla futhi enamandla, umzimba ukuze wakhe "okuqinile" ukuvikelwa kabili, nweba impilo yesevisi yomshini.
Petroking Transmission Oil # 8 2l Ibhodlela